COVID-19 ပိုးဟာ ရေထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်ပြီလား - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 28/09/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
COVID-19 ရောဂါပိုးဟာ ရေထဲမှာ အသက်ရှင်နိုင်သလား? အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရေဆိုတာဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိကအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူသားတွေ အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဆိုလည်း မှန်ပါတယ်။
ခုဆို ဒီရောဂါဆိုးကြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတာဟာ ၄ လ ကျော်နေခဲ့ပါပြီ။ ခုချိန်ထိ တိကျရေရာတဲ့ ကုထုံးမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ သေဆုံးသူအရေအတွက်နဲ့ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက်ကတော့ မှန်မှန်ကြီး တိုးတက်လာနေပါတယ်။ ဒီတော့ လူတိုင်းက ဒီရောဂါကို ကြောက်ရွံ့နေကြပြီး လက်လှမ်းမှီရာအချက်အလက်တိုင်းကို သိလိုနေကြပါတယ်။
ကူးစက်မြန် အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆိုးကြီး ပြန့်ပွားလာချိန်ကတည်းက ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ရောဂါပိုး ကပ်ငြိနိုင်ပြီး ဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာကို လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ အစောပိုင်း လေ့လာချက်တွေအရ ဒီရောဂါပိုးဟာ မာကျောတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေမှာ ပိုမိုရှင်သန်နိုင်ပြီး ရက်အတန်ကြာအထိကပ်ငြိနေနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရေထဲမှာ ရောဂါပိုး ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိ၊မရှိဆိုတာကိုတော့ သက်သေသက္ကာယ တိတိကျကျ ပြသနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ထူးခြားတဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုဗစ်ပိုးဟာ ရေထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာဖော်ထုတ်ချက်ပါပဲ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ရေထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်နေပြီလား?
အခြေခံအားဖြင့်က COVID-19 ရေထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်သလားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီအိုရီတွေ အများပြား ရှိနေကြပါတယ်။ WHO အပါအဝင် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီရောဂါပိုးဟာ ရေထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိ၊မရှိနဲ့၊ ရေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်စွမ်း ရှိ၊မရှိဆိုတာတွေကို သေချာစွာ မသိရှိရသေးဘူးလို့ ဆိုနေဆဲပါ။
ဒါပေမယ့် ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံ အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်က လေ့လာချက်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လေ့လာချက်တွေအရဆိုရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ရေထဲမှာ ၂ ရက်ကနေ ၃ ရက်အထိ ရှင်သန်နိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
သူတို့ လေ့လာချက်ဟာ စွန့်ပစ်ရေတွေကနေတဆင့် ပင်လယ်ရေထဲကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို လေ့လာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မိလ္လာတွေကြောင့် ဒီပိုးတွေ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တာလား? ရေထဲမှာကို ခုလို ရှင်သန်နိုင်တာလားဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရှိရသေးပါဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဒီအခြေအနေကို တိတိကျကျသိရှိရဖို့ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခုလေ့လာချက်အရ ရေကူးကန်တွေ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေနဲ့ စွန့်ပစ်ရေမြောင်းတွေဟာ ရောဂါပိုးရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သာမန်လူ ၂ ယောက် ရေထဲကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့ ကုန်းမြေပေါ်မှာလို ၆ ပေ အကွာမှာ ရှိနေရုံနဲ့ ရောဂါပိုးမကူးစက်အောင် တားဆီးထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ လေ့လာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ ရေထဲကနေတဆင့်သာ ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုရင် အခြေအနေက ပိုပြီး ဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုကြပါတယ်။
ရေသန့်နဲ့ COVID-19 ကို သတ်ဖြတ်နိုင်သလား
အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် လက်ကို ရေ၊ ဆပ်ပြာစတာတွေနဲ့ သေချာစွာ ဆေးကြောရင် ရောဂါပိုးကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအတော်များများက ရေက ရောဂါပိုးကို နှိမ်နင်းနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ရေက ရောဂါပိုးကို မသတ်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း ရောဂါပိုးကို ဖယ်ရှားပေးတာက ဆပ်ပြာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောရုံနဲ့ ရောဂါပိုးကပ်ငြိမှုကို တားဆီးနိုင်၊ ဖယ်ရှားနိုင်တာဟာ သန့်စင်တဲ့ရေ ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးနဲ့ ဆပ်ပြာတို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်စွမ်းအားကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ရေတစ်မျိုးတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
သန့်စင်ထားပြီး ဘူးနဲ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ သောက်ရေသန့်တွေဟာ ပိုးသန့်စင်ပြီးဖြစ်တာမို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုလည်း သတ်ဖြတ်နိုင်သလားဆိုပြီး မေးမြန်းမှုတွေ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ၊ မရှိကို ဘယ်သူမှ အဖြေထုတ်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။
မိုးရာသီရောက်လာတော့မယ်၊ ကိုဗစ်ကို ပိုကြောက်ရတော့မှာလား?
ရောဂါပိုးဟာ ရေထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိ၊ မရှိနဲ့၊ ရေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်စွမ်း ရှိ၊ မရှိဆိုတာတွေကို သေချာစွာ မသိနိုင်သေးတာမို့ ရေကနေတဆင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိ၊ မရှိကို အတိအကျ သုံးသပ်ပြောဆိုဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသန့်စင်တဲ့ ရေတွေနဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကပ်ငြိနိုင်တာကို သတိထားဖို့ တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သောက်သုံးရေရှားပါးတဲ့အရပ်တွေမှာ သန့်စင်တဲ့ရေရရှိနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေတာမို့ လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးကြောရာမှာ အဆင်ပြေရာ ရေတွေနဲ့ ဆေးကြောမိနေတာမျိုးတွေ ရှိနေပြီး ဒါဟာ COVID-19 အပြင် တခြားသော ကူးစက်ရောဂါတွေကိုပါ ဖိတ်ခေါ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မကြာခင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မုတ်သုံရာသီဥတုစတင် ချဉ်းနင်းဝင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 သာ ရေထဲမှာ ရက်အတန်ကြာနေနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကလည်း ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။
ရောဂါပိုးဟာ ရေထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်တယ်လို့ ဖော်ထုတ်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ရှင်သန်နိုင်လဲဆိုတာကို အတိအကျ မသိရှိရသေးပါဘူး။ မသန့်စင်တဲ့ရေတွေထဲမှာသာ ရှင်သန်နိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုထားပါတယ်။
သေချာတာကတော့ မသန့်ရှင်းတဲ့ ရေတွေကနေဆင့် အရေပြား၊ နား၊ မျက်စိနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ခြေရှိနေတာမို့ COVID-19 ရှင်သန်နိုင်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သန့်စင်တဲ့ရေကိုသာ အသုံးပြုဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင်္ကြန်ကာလမှာ အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်ကို မထွက်ပဲ နေအိမ်မှာပဲ Social Distancing ပြုလုပ်နေတာ၊ ကျန်းမာရေးဌာနက ညွှန်ကြားထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာနေထိုင်တာဟာ ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သန့်စင်တဲ့ရေကိုသာ အသုံးပြုဖို့လည်း မမေ့ကြနဲ့နော်။